पूजा सुनुवारको गीतमा प्रकाश र बर्षाको प्रेम
झापा, मंसिर ९ । गायिका पूजा सुनुवारको पछिल्लो गीतिसंग्रह ‘रहर’ सार्वजनिक गरिएको छ । ‘रहर’ एल्बमभित्रको ‘हुन्छ भनन’ गीतभिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ । संगीतकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण शेषले
विकास लिम्बु : गाउँको स्टेज नपाएको झोकले खारिएको आवाज
झापा, मंसिर ६ । चोट सधैं हानिकारक हुँदैन । चोटले मान्छेको सहनशीलता नाप्छ, चोटले मान्छेलाई दुःखसँग लड्न सिकाउँछ र चोटले मान्छे बदलिदिन्छ । भलै त्यो सानो चोट थियो, तर विकास
भ्वाइस अफ नेपालको टप १२ मा बिर्तामोडका राम लिम्बु, जिताउन भोटको अपिल
बिर्तामोड ,कार्तिक २८ । हिमालयन टिभीको रियालिटी शो भ्वाइस अफ नेपालको सिजन टुको टप १२ मा परेका झापा बिर्तामोडका राम लिम्बूलाई जिताउन स्थानीय समर्थकले अभियाननै सुरु गरेका छन् । आफूलाई
भ्वाइस अफ नेपालको टप १२ मा बिर्तामोडका राम लिम्बु
झापा, कात्तिक १९ । हिमालयन टेलिभिजनमा प्रशारण हुदै आईरहेको चर्चित रियालिटी सो भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ मा आफुलाई अब्बल साबित गर्दै लाईभ राउण्डमा झापाको बिर्तामोडका २३ बर्षिय राम लिम्बुले प्रवेश
इलामेली नवगायक गोपाल पराजुलीको “सधैं तड्पाई राख्नु भन्दा ” सार्वजनिक (भिडियो)
इलाम, कार्तिक १३ । इलामेली नवगायक गोपाल पराजुलीको अर्को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । पराजुलीको आफ्नै स्वरमा सधैं तड्पाई राख्नु भन्दा बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । तिहारको शुभ अवसर पारेर
छमछमीको फाइनल केही समयमा, भोट गरिदिन दिलमायाकाे अन्तिम अनुराेध
झापा । रियो छमछमी ४ को फाइनलमा पुगेकी झापा बुद्धशान्तिकी दिलमाया लिम्बुले आफूलाई विजेता बनाउन सबैसंग अपिल गरेकी छन् । उनले सम्पूर्ण प्रदेश नं. १ बासी र नेपालीहरुका लागि आफ्नो
फ्राइडे रिलिज: आजबाट पूजा र सौगातको ‘पोइ पर्‍यो काले’ रिलिज
काठमाडौं, कार्तिक ८ । आज शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’ प्रदर्शनमा आएको छ । पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, सृष्टि श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका रहेको यो चलचित्रको रिलिजअघि
सूर्याेदयका दुइ कलाकारकाे म्युजिक भिडियाे सार्बजनिक
इलाम, असाेज २८ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका २ जना नवगायकले दशैको अवसरमा एक एक वटा म्युजिक भिडियो सार्बजनिक गरेका छन् । वडानम्बर १३ लक्ष्मीपुरका प्रबिण बिसी र वडा नम्बर १०
हाँस्य टेलिचलचित्र टेन्सन साफ प्रशारण हुने
झापा, असाेज ५ । एभरग्रीन वल्डवाइड इन्टरटेन्ड्मेन्ट प्रा. लिको प्रस्तुति हाँस्यव्यङ्ग्य टेलिचलचित्र टेन्सन साफ दशै लगत्तै टेलिभिजन साथै युटुव च्यानलबाट प्रशारण हुने निश्चिति भएको छ । जसलाई निर्देशक गर्नु भएको
दयाहाङ र उपासनाको ‘माया पिरती’
झापा, भदाै ३१ । असोज ३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को ‘माया पिरती’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । कालिप्रसाद बास्कोटाको स्वर तथा संगीत रहेको यो गीतमा